Tunisia Tourism laghachi: nde mmadụ 8.3 na-emefu $ 1.4 ijeri
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Tunisia Tourism laghachi: nde mmadụ 8.3 na-emefu $ 1.4 ijeri
Na-agbasa News Travel • investments • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ kacha ọhụrụ na Tunisia
Ndị njem Europe hụrụ Tunisia n'anya, ọ gosipụtara. N'agbanyeghị US nwere ihe ngosi njem na ebe, ndị Europe na-agakwa Tunisia ọzọ. Akwụkwọ ọnụahịa ndị njem njem nke Tunisia gbagoro na USD 1.4 ijeri na Tunisia site na Jenụwarị ruo 20 Disemba 2018, dị ka ọnụọgụ nke Ministry of Tourism and Handicrafts nyere ụlọ ọrụ mgbasa ozi Tunis Afrique Presse (TAP). Ọnụ ego ahụ ruru dinar ijeri 3.9 (USD 1.4 billion) ma gosipụta mmụba 42.1% n'otu oge ahụ na 2017.
Dabere na TAP, 2018 ghọrọ nke kacha mma n'ime afọ iri gara aga maka njem nleta na Tunisia. Dịka na Disemba 31, mba ahụ natara nde mmadụ 8.3, mmụba 17.7% karịa 2017.
Ndi France buru uzo, ndi Algeria sochiri ya. Maghreb bụ mpaghara Afrika na-achịkọta Libya, Tunisia, Algeria, Morocco, na Mauritania.
Banyere ịnọ abalị na họtel, mpaghara ndị kachasị ewu ewu bụ Djerba-Zarsis Sousse, Nabeul-Hammamet, Monastir-Skanes, Yasmine Hammamet na ụsọ mmiri nke Tunis-Carthage.